China 12 Chivabvu 2022
Chifukidzo Chemenu Maapepa epurasitiki mashoma akajeka ane magneti anoshanda seyakafukidza yakakwana yemhando dzakasiyana dzezvakadhindwa. Easy kushandisa. Chinyore kugadzira uye kuchengetedza. Chigadzirwa chinogara kwenguva refu chinosevha nguva, mari, zvigadzirwa. Zvakatiparira ushamwari. Nyore kushandurwa nyore kune zvakasiyana zvinangwa. Yakakodzera kushandiswa mumaresitorendi sevharo remamenyu. Kana waiter anounza iwe chete peji imwe chete nemichero cocktails, uye ingori peji imwe chete nemakeke eshamwari yako, semuenzaniso, inenge yakafanana nemamenu yakasarudzika yakagadzirirwa iwe.
Chipiri 10 Chivabvu 2022
Muvhuro 9 Chivabvu 2022
Svondo 8 Chivabvu 2022
Digital Inopindirana Magazini
Mugovera 7 Chivabvu 2022
Digital Inopindirana Magazini Filli Boya Dhizaini Yemagazini Magazine inotsanangura kukosha kwemavara muhupenyu hwedu kune vanoaverenga nenzira dzakasiyana uye inonakidza. Zviri mukati meMagadzirirwo eMweya zvine nzvimbo yakafara kubva mufashoni kusvika kunehono; kubva pakushongedza kusvika pakuchengeta kwega; kubva kumitambo kuenda kune tekinoroji uye kunyangwe kubva kuzvikafu nezvinwiwa kusvika kumabhuku. Mukuwedzera kune akakurumbira uye anonakidza mifananidzo, kuongorora, hwazvino tekinoroji uye kubvunzurudza, magazini iyi inosanganisirawo inonakidza yezvinhu, mavhidhiyo uye mimhanzi zvakare. Filli Boya Dhizaini Yemagazini Magazine inoburitswa makota matatu paPac, iPhone uye Android.
180º North East Riini Chitatu 18 Chivabvu
Ballo Chinotakurika Mutauri Chipiri 17 Chivabvu
CATINO Imba Yekugezera Muunganidzwa Muvhuro 16 Chivabvu
Chifukidzo Chemenu Dvd Bhokisi Dhizaini Webhusaiti Doro Bhaini Swatches Zita Rekuzivikanwa Digital Inopindirana Magazini